Shahaadadaa la Aqoonsaday Waxa ka horraysa Waa loo Shaqo Tegi Karaa…W/Q:-Mohammed Yousuf. |
Maqaalkan koobani wuxuu daba socdaa maqaalka _ Danjire Munir oo Ku Guulaystay in UAE oggolaato Shahaadaha Somaliland.
Waan soo dhowaynayaa wax qabad kasta oo togan oo uu Danjire Muniir ku tallaabsado.
Waan ku arkay websiteka wazaaradda waxbarashada ee UAE in ay oggolaatay Shahaadaha wax barasho ee Somaliland waanan ku farxay, laakiin in taa laga dhigto waxqabad Danjire sameeyay oo lagu faano maaha.
Danjiruhu wuxuu ku wajahan yahay wazaaradda arrimaha debedda ee UAE oo ay tahay inuu ku qanciyo inay ogolaadaan in passport keenna loogu shaqo tegi karo dadkeenana la shaqaaleeyo.Haddaan passportka la ogolaan shahaada layslama gaadhayo.
Waxaynu ogayn in Madaxweynaha Somaliland safarkiisii u horreeyay ee uu ku tago UAE isagoo Madaxweyne ah uu la hadlay jaaliyadda Somaliland ee UAE una sheegay inuu dawladda UAE kala hadlay arrinka Passportka Somaliland in loogu shaqo tago UAE waxaanu sheegay in Passport cusub samayntiisa gacant lagu hayo iyadoo ay ahayd shuruud ay UAE ku xidheen in Passport Electronic ah la sameeyo waxaanu ballan qaaday in uu arrinkaasi dhammaanayo bisha July 2019. Ilaa haddana waxba ma fulin.
Waxa jirtay in gabadh aan dhalay ay shaqo ka heshay shirkad deggan imaaraadka oo contract la kala saxeexday lagana ansixiyay wazaaradda arrimaha gudaha ee UAE immigrationka. Markii loo samayn lahaa entry Visa ay ku gasho UAE waxaannu u sheegnay inay ka soo jeeddo Somaliland laakiin Passportkii aanu weli dhammaan way soo diideen.
Danjiraha yaannu la socodsiinay arrinka oonnu u dirnay contractkii iyo waraaqihii oo dhan waxna kamuu qaban.
In immika lagu faano shahaadadaanu ogolaysiinnay UAE waxa ka roon in loo shaqo tago ayaannu ogolaysiinnay dadkeenuna way u shaqo tegi karaan.